I-Streamlink, isixhobo se-CLI sokujonga imijelo yevidiyo ekwi-intanethi | Ubunlog
I-Streamlink, isixhobo se-CLI sokujonga imijelo yevidiyo ekwi-intanethi
UDamien A. | | Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Streamlink. Yi le umgca wokuyalela oya kusivumela ukuba sihambise ukuhanjiswa kwevidiyo kwiinkonzo ezahlukeneyo ziye kumdlali wevidiyo, Esiza kuthi ngaphambili sibeke kwikhompyuter yethu. Eyona njongo iphambili yesi sicelo kukuphepha iiwebhusayithi ezingalungiselelwanga, ngelixa uvumela umsebenzisi ukuba onwabele umxholo ohanjiswayo.
I-Stlinklink yi Inkqubo yomthombo ovulekileyo ebhalwe ngolwimi lwePython. Le nkqubo yenziwa ifolokhwe kwi-LiveStreamer, engasagciniwe. Sisoftware ehambelana neGNU / Linux, Windows kunye neMac OS X. Umntu asebenza naye sele ethethile ngale nkqubo kwi le bhlog okwethutyana elidlulileyo, kodwa ngoku siza kubona iindlela ezininzi zokufaka le nkqubo ku-Ubuntu.
I-Streamlink sisixhobo sokuhambisa umgca somyalelo esiya kuthi sisivumele Bukela imijelo yevidiyo ekwi-intanethi kubadlali beendaba abadumileyo abaziwayo njengeVLC, MPlayer, MPlayer2, MPC-HC, mpv, iDaum Pot Player, i-QuickTime kunye ne-OMXPlayer, njl..
Kule mihla le software ixhasa iinkonzo zokusasaza ividiyo njenge-YouTube, Dailymotion, Livestream, Twitch, UStream nokunye. Njengoko esi sicelo sisekwe kwinkqubo yezongezo ezikuvumela ukongeza ngokulula iinkonzo ezintsha. Ungajonga uluhlu lwezinto ezikhoyo ezikhoyo unxibelelwano.
Kubalulekile ukubeka ingqalelo I-Streamlink ayizukudlala imijelo yevidiyo ukuba akukho zixhobo zeendaba ziyafumaneka kwinkqubo. Ke ngoko, kufuneka uqiniseke ukuba ufake umdlali kwinkqubo yethu ngaphambi kokusebenzisa le nkqubo.
1 Faka iSlinklink kwi-Ubuntu
1.1 Ukuhamba ngePIP
1.2 Njenge AppImage
2 Ukujonga ngokukhawuleza kwenkqubo
2.1 Dlala ividiyo
2.2 Uluhlu lwemisinga ekhoyo
2.3 Dlala iaudiyo kuphela
2.4 Khetha umdlali oza kumsebenzisa
2.5 Bona ezinye iinkonzo
Faka iSlinklink kwi-Ubuntu
Okoko iScrlink ibhaliwe kusetyenziswa iPython, inokufakwa kusetyenziswa umphathi wephakheji PIP. Ukuba ikhompyuter yakho ayinaso esi sixhobo, ungayifaka usebenzisa i-terminal (Ctrl + Alt + T):
Xa sele unayo iPip efakwe kwikhompyuter yakho, unga sebenzisa lo myalelo ulandelayo ukuze ufake iSlinklink:
sudo pip3 install streamlink
Unokuyonwabela le sicelo usebenzisa ifayile yayo ye-AppImage ehambelanayo. Oku kunokukhutshelwa kwi iphepha lokukhupha usebenzisa isikhangeli sewebhu okanye ngokuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kunye nokusebenzisa wget ngoku Landelayo:
wget https://github.com/streamlink/streamlink-appimage/releases/download/2.4.0-1/streamlink-2.4.0-1-cp39-cp39-manylinux2014_x86_64.AppImage -O streamlink.AppImage
Xa sikhuphele ifayile yeAppImage, sinayo kuphela yenze isebenze ngomyalelo:
chmod +x streamlink.AppImage
Okwangoku, sinako yazisa inkqubo ngokunqakraza kabini kwifayile, okanye ngokuchwetheza kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T) umyalelo:
Ukujonga ngokukhawuleza kwenkqubo
Njengoko kuphawulwe imigca engentla, esi sisicelo somgca wokuyalela. Ukusetyenziswa kwesiqhelo seStrlink iya kuba yinto efana nale ilandelayo:
streamlink [OPCIONES] <URL> [CALIDAD]
I-URL ibonisa i-URL yokusasaza ividiyo kwi-Intanethi. Ingaba nayiphi na ikhonkco yevidiyo kwiindawo ezixhaswayo. UMGANGATHO ubonakalisa umgangatho wevidiyo. Ingasetyenziswa 'eyona'okanye'kunazoukufumana owona mgangatho uphakamileyo okanye usezantsi ofumanekayo. Ukongeza siya kuba nethuba lokuchaza uluhlu lwezisombululo ezahlulwe ngeekoma, ezingayinto efana nale ilandelayo:
Ukuba akukho kulandelelana kuchaziweyo kwaye akusetyenziswanga -Ungagqibekanga-ngumjelo, inkqubo iya kuprinta uluhlu lwamabakala akhoyo.
I-Streamlink siza kudlala imijelo yevidiyo kwisidlali sevidiyo esingagqibekanga.
./streamlink.AppImage https://www.youtube.com/watch?v=-tAEAyHgCec best
Nje ukuba usebenze lo myalelo, I-Streamlink ikhupha umjelo wevidiyo okwi-intanethi ukusuka kwi-url echaziweyo kwaye uyihambisa kumdlali wevidiyo osilelayo (kwimeko yam iVLC), okanye apho sibonisa khona ngomgangatho ofumanekayo.
Uluhlu lwemisinga ekhoyo
Ukubona uluhlu lwevidiyo ekhoyo, konke okufuneka ukwenze kuku ungakhankanyi ixabiso LOKUGQIBELA (okubi kakhulu okanye okugqwesileyo).
Dlala iaudiyo kuphela
Ukuba unomdla wokumamela kuphela iaudiyo, Ekupheleni komyalelo kuya kufuneka wongeze "iaudio_mp4a"Okanye"Iaudio_webm" ngaphandle kwe "eyona":
streamlink https://www.youtube.com/watch?v=-tAEAyHgCec audio_mp4a
Khetha umdlali oza kumsebenzisa
Ukuba ufuna ukudlala imijelo yevidiyo ngesidlali esahlukileyo kunaleyo ingagqibekanga, Kuyimfuneko kuphela ukuyichaza ngokhetho –Umdlali ilandelwe ligama lomdlali:
streamlink https://www.youtube.com/watch?v=-tAEAyHgCec 480p --player mplayer
Lo myalelo uza kudlala umjelo wevidiyo onikiweyo kumgangatho we480p usebenzisa iMplayer ukuyidlala kwakhona.
Bona ezinye iinkonzo
Le nkqubo inokusetyenziswa kunye nezinye iinkonzo zokusasaza kwi-Intanethi kwiiplagi. Uluhlu olupheleleyo lweefowuni ezibandakanyiweyo ngoku lunokufumaneka kwifayile ye- iwebhusayithi yeprojekthi.
Ukongeza sinako Uluhlu lweeplagi usebenzisa umyalelo:
Abasebenzisi abafuna banako Fumana ulwazi oluthe kratya malunga nokusebenzisa le nkqubo unokujonga kumaphepha endoda:
Okanye ngokuchwetheza kwisiphelo sendlela:
Ukongeza, abasebenzisi banako yazi ngakumbi ngendlela osebenza ngayo nale nkqubo, usebenzisa i tutorial enikezelwa kwiwebhusayithi yeprojekthi okanye kwifayile yakho ye- Indawo yokugcina izinto zeGitHub.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » I-Streamlink, isixhobo se-CLI sokujonga imijelo yevidiyo ekwi-intanethi
I-Canonical ibhengeze ukumiliselwa kwesakhelo se-Ubuntu, umboniso wayo omtsha we-OS
Mir 2.5 sele ikhutshiwe kwaye ezi ziindaba zayo